IZAHO KOA TSY MANAMELOKA ANAO – filazantsaramada
IZAHO KOA TSY MANAMELOKA ANAO
Publié parfilazantsaramada	 avril 21, 2017 Laisser un commentaire sur IZAHO KOA TSY MANAMELOKA ANAO
« Izaho koa tsy manameloka anao; mandehana, ary amin’izao sisa izao dia aza manota intsony. » Jaona 8: 11b
Rehefa misy lalàna dia misy ny fankatoavan-dalàna ary misy koa ny tsy fankatoavan-dalàna. Ilay olona eto amin’ity tantara eto ity dia azo nandika ny lalàn’I Mosesy, ary izao nentina teo amin’I Jesosy. Fariseo sy mpanora-dalàna no nahatratra ity olona ity. Ary izao eto izao no valiny nomen’i Jesosy.
– Rehefa inona Jesosy no manameloka? Voalazan’ny Soratra Masina fa « Andriamanitra manohitra ny mpiavonavona. »Jak 4: 6. Ireto fariseo sy mpanora-dalàna ireto dia hita fa miavonavona, tsy hita izay nataony rehefa notenenin’I Jesosy hoe: izay rehetra tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy. Tsy mba mandini-tena ka mibebaka fa mitsara ny hafa no mahamaika.
– Rehefa inona Jesosy no mamela heloka? Rehefa manetry tena ka mibebaka amin’ny ota natao ny olona iray. Fibebahana ity takian’I Jesosy eto ity. Ary amin’izao sisa izao aza manota intsony. Manatre tena ary ka mibebaha dia handray famelan-keloka avy amin’I Jesosy ianao.
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Publié parfilazantsaramada avril 21, 2017 Publié dansUncategorized
Ireo mpiara-miasa an-tsitrapo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny fanoloran-tenany
“Henoy ny feony”